नेकपा एकता : कुन नेताको भागमा कुनकुन जिल्ला पर्‍यो ? यस्तो छ विवरण
७७ जिल्लामध्ये ३ महिला र २ दलितले मात्र जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए
निशान न्युज बैसाख १०, 2076
काठमाडौं । सोमबार निक्कै तामझामका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाइयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा आयोजित कार्यक्रममा नौवटा कुर्सी मञ्चमा राखिएका थिए । सचिवालयमा रहेका नौ जनाका लागि राखिएका ती कुर्सीमध्ये दुइटा विशिष्ट खालका कुर्सी थिए– सोफावाला ।
अरू सातवटा सामान्य फलामका । अर्थात् विशिष्ट र कनिष्ठ झल्किने खालको दृश्य कुर्सीको व्यवस्थापनमा देखिन्थ्यो । झन्डै साढे १ बजे कार्यक्रम हलमा चार नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल एकै पटक भित्रिए । उनीहरू छिर्नेबित्तिकै हलमा हुटिङ भयो । उनीहरूले अभिवादन गरे । जब महासचिव विष्णु पौडेलले दुई जना अध्यक्षले मात्रै बोल्ने उदघोष गरे, तब नेपालको मुख मलिनो बन्यो । त्यति मात्रै होइन, जिल्ला नेतृत्वको लिस्ट हात परेपछि नेपाल निक्कै छटपटिए । अनि उनी उकाएक मञ्चबाट बाहिरिए ।
जिल्ला नेतृत्वमा पूर्वएमाले पक्षमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरको हिसाबकिताब भएको थियो । जिल्ला सचिवमा ओली पक्षका १४, नेपाल पक्षका १९, दाहाल पक्षका ३६ र थापा पक्षका ८ जना नेताले जिम्मेवारी पाएका छन् । ७७ जिल्लामध्ये ३ महिला र २ दलितले मात्र जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
पूर्वएमालेले पाएको ४४ वटा अध्यक्षमा २८ जना ओली र १६ जना नेपाल पक्षधर परेका छन् । सचिवमा पूर्वएमाले पक्षले पाएको ३३ स्थानमध्ये २२ जना नेपाल र ११ जना ओली पक्षका परेका छन् । अध्यक्ष र सचिवमा पूर्वएमाले पक्षले पाएको कुल ७७ पदमध्ये ३९ जना ओली पक्ष र ३८ जना नेपाल पक्षका परेका छन् ।
इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, बागलुङ, डोल्पा, अछाम, दाङ, सुर्खेत र कैलालीको अध्यक्ष वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले पाएको छ । थापा पक्षले भने जाजरकोट, कालिकोट, बाँके, काभ्रे र रामेछापको नेतृत्व पाएको छ ।
श्रेष्ठ पक्षले महोत्तरीको मात्र नेतृत्व पाएको छ । अन्य जिल्लामा भने अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पक्षका नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका छन् । ७७ जिल्लामध्ये तीन महिलाले र २ जना दलितले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
जिल्ला अध्यक्षमा केपी ओली पक्षका २८ र माधव नेपाल पक्षका १६ जना छन् । पुष्पकमल दाहाल पक्षका २७, रामबहादुर थापा पक्षका ५ र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका एकजना जिल्ला अध्यक्ष भएका छन् । जिल्ला सचिवमा ओली पक्षका १४, नेपाल पक्षका १९, दाहाल पक्षका ३६ र थापा पक्षका ८ जना नेताले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
लिम्पियाधुरासहित नेपालको नयाँ नक्सा, मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी
काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरासहित नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आर्थिक व...
एमसीसी यही संसद बैठकबाट पारित गराउन सभापति देउवाको माग
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज क...
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि नेकपाको सथायी कमिटी बैठक स्थगित
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । बुधबार बिहान ११ ब...
नेकपाले बोलायो स्थायी कमिटिको बैठक, धुम्बाराहीमा बिहान ११ बजे बस्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक भोलि बस्ने भएको छ । तत्कालका लाग...
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, केही दिनमै टुंगो लाग्ने
काठमाडौं । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठ...
अनिश्चित बन्यो नेकपाको सचिवालय बैठक, ‘बल’ पुग्यो ओली र प्रचण्डको हातमा
काठमाडौं । स्थायी कमिटी बैठकमा राखिने एजेण्डा तयार पार्न नसक्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स...
मल्लकी छोरीसँग प्रेम गर्दा यसरी गयो बिकको ज्यान, ६ जना अझैं बेपत्ता
जाजरकोट । अन्तरजातीय विवाह गर्न रुकुम पुगेका एक दलित युवकका मृत्यु भएको छ । गैर दलितको छोरी लैजा...
पूर्व सचिव उपाध्यायले ‘मरेपछि डुमै राजा’ भनेपछि...
भारतलाई चुनौती दिँदै गुगलले दियो नेपाललाई साथ
बालिकालाई यौन शोषण गर्ने शिक्षक अधिकारी पार्टीबाट सदस्यतासमेत नरहने गरी निष्कासित
सांसद राईले धनकुटा पठाए साँढे ६ लाखको औषधि
अन्तरजातीय प्रेम विवाह : घटनाविरुद्ध ताते देशभरका दलित, तात्यो सत्तारुढ दलको दलित संगठन पनि
धनकुटाका ५ जना संक्रमितलाई पुर्‍याउन रेडक्रस सभापति आफैँ पुगे विराटनगर
स्थानीय तहको पहलमा फर्काउन थालियो प्युठानीलाई, ८ सयको गरियो उद्धार
आर्थिक प्रलोभनमा पारी युवतीलाई सामुहिक बलात्कार
आजको दिन दशा ग्रह कस्तो छ ? शनिको दर्शन गर्दै हेर्नुस् यस्तो छ तपाईको राशीफल